December | 2020 | HimiloNetwork
Dulucda Tababbar ku saabsan Tebinta Wanaagsan ee Doorashooyinka.
Himilo December 30, 2020	Leave a comment 555 Views
MUQDISHO (HN) — Seminaar ujeedkiisu ahaa in la fahmo sida halista looga taxaddaro iyo sida loogu shaqeeyo duni halis ku ah nolosha iyo bedqabka weriyaha Somaaliyeed ayaa lagu qabtay hoteelka Jazeera Palace ee caasimadda Muqdisho. Tababbarkan oo ay ku deeqday Hey’adda IMS waxaa intii u dhaxaysay 26-29 bisha December loo qabtay bahda Tifaftirayaasha Warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwo dowladda. Waxaana ...
Ol’olaha ‘samafal samee’ oo hel hadiyad
Himilo December 21, 2020	Leave a comment 174 Views
MUQDISHO (HN) — Duqa magaalada Fishers ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka, ayaa billaabay ol’ole cusub oo lagu xoojinayo is-dhexgalka iyo iska warqabka bulshada. Ol’olaha loogu magac daray “Loolanka labada kun ee samafal” ayaa ku dhiiri-galinaya dadku inay sameeyaan wax uun samafal ah sida inay qof siiyaan cunno, saaxiibadood u diraan fariimo dhiirigalin ah, soo dhaweeyaan dadka ku cusub magaalada amaba ...
Himilo December 20, 2020	Leave a comment 396 Views
MUQDISHO (HN) — Intii u dhaxeysay 1992-1993, warbaahinta caalamka waxay soo tebinayeen muuqaallo argagax leh oo la xiriira abaartii ba’neyd ee ku dhifatay gobollada Bay iyo Bakool. Waxay ahayd waqti kale oo adag oo laga dhaxlay burburkii dalka iyo dagaalladii sokeeye ee dalka ku baahay. Kahor intaanu ka degin magaalada Beydhabo Madaxweynihii Maraykanka G.W. Bush bilowgii 1993-kii, maalin walba waxaa ...
Muslimiinta Queenstown oo helay Masjidkii ugu horreeyey.
Himilo December 20, 2020	Leave a comment 193 Views
MUQDISHO (HN) — Muslimiinta ku nool magaala-dalxiiseedka Queenstown, New Zealand, oo sidoo kale quruxdeeda lagu halqabsado, ayaa u dabaal-degaya guusha ay kasoo hoyeen dhismaha Masjidkii ugu horreeyey oo ay ka dhistaan magaalada. “Waxaan ku faraxsannahay inan guntii helnay masjid aan wadajir si midaysan ugu wada cibaadeysan karno,” ayuu yiri Mohammad Nadheem, oo ah guddoomiyaha Queenstown Islamic Centre. “Kahor dhismihiisa, waxaanu ku ...
Himilo December 20, 2020	Leave a comment 143 Views
MUQDISHO (HN) — Masjid ku yaalla Norwich, Norfolk, England wuxuu si habsami leh u baahinaya adeeg samafal oo lagu caawinayo kuwa ayaanka liita ee darbi-jiifta ah. Si taas u suura-gashana, Koox samafal oo la yiraahdo East Anglian Bangladesh oo kaashanaysa St Martins Housing Trust ayaa toddobaadle cunnooyin ugu qeybinaysa dadka hoy la’aanta ah. Cunnooyinka oo isugu jira digaag, qudaar iyo ...
Himilo December 17, 2020	Leave a comment 292 Views
MUQDISHO (HN) — Waa maalin shaqo. In badan sida Yalax Printing waxaa nasiib weyn u ah inay ku shaqeeyaan xaaladda adag ee halkan ka jirta. Balse waxay xumaato u dareemayaan nasiib-darrada heysata inta kale. “Waxaan aad ujeedid oo dukaamo ah waxay u xiran yihiin dhiiqada iyo wasaqda tuban laamiga,” ayuu yiri Daljir isaga oo farta ku fiiqaya tiro baqaarro iyo ...
Sheekada Gabadhii Dilaaga Aabaheed ka dhigatay Soddogeeda.
Himilo December 17, 2020	Leave a comment 329 Views
KIGALI (HN) — Kahor inta uusan dhicin Xasuuqa, Vicent Sibomana ‘Hutu’ iyo Joyce Uwimana ‘Tutsi’ waxay ahaayeen lammaane jaceyl wadaag ah. Markii uu bilowday Xasuuqa, lammaanaha jiiraanka ahi, waalidkii dhalay waxay qeyb ka noqdeen mashaqadii dhacday. Vincent aabihiis oo ahaa Hutu wuxuu dilay Joyce aabaheed oo ahaa Tutsi. Halkaas waxaa ku idlaaday xiriirkii derisnimo iyo midkii jaceyl oo lammaanaha ay ...
Himilo December 15, 2020	Leave a comment 252 Views
MUQDISHO (HN) — Baraha bulshada dalka Fiitnaam waxaa qabsatay sheekada gabar 19 jir ah oo martay qaliin dhinaca wejiga ah kaddib markii ay muqaalkeeda awgeed ay ku kala hareen jaceylkeedii hore. Nguyen Tuong Vy waxay wararka ugu shidan ku yeelatay cinwaanka hore kaddib kolkii ay baraha bulshada kusoo baahisay sawiro ay sannado kahor iska qaaday kahor intaanay qaliin isku sameynin. ...
La kulan: Ninka heysta Keyd ku dhow 2,000 oo Telefoonno ah.
Himilo December 15, 2020	Leave a comment 150 Views
MUQDISHO (HN) — Sehabettin Ozcelik, oo ah fuundi farsameeya telefoonnada cilladaysan ayaa haya keyd ka badan kun xabbo oo telefoonnadii hore ah kuwaas oo badankood adeegsi-gal noqon kara. Waxaana ugu caansan Nokia 3310 ama Motorola Razr V3. “Xiisaha aan u qabo moobillada awgeed ayaan u bilaabay keydintooda,” ayuu yiri. “Maalin ayaa go’aansaday inaan ururiyo anigoo is leh durba waa laga ...
Himilo December 15, 2020	Leave a comment 236 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeney 31 jir ah taas oo dhawaan gashay qaliin dhinaca qurxinta sanqaroorka ah ayaa la walbahaartay markii ay ogaatay in carrabka dhegteeda laga jaray iyada oo aan la ogeysiin. Haweeneydan oo magaceeda lagu sheegay Ms. Zhao, waxay kowdii September qaliin sanka ah ku martay Angel Wing Hospital. Wuxuuna ahaa midkeedii labaad muddo shan sano gudaheed ah. Zhao ...
Muslimiinta Edmonton oo bogaadiyay yeermada Aadaanka Codbaahiyaha.